ARLETTE RAMAROSON: “Ny fahamarinana no manandratra ny firenena” | Madatopinfo
ARLETTE RAMAROSON: “Ny fahamarinana no manandratra ny firenena”
Efa hiditra amin’ny volana martsa isika izao, mbola vitsy ireo nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny firotsahany hofidiana amin’ny fifidianana Filoham-pirenena. Arlette Ramaroson, Filohan’ny vondron’ny tia tanindrazana ho an’ny fanarenana an’i Madagasikara, vehivavy voalohany nilaza tamin’ny fomba ofisialy ny fahavononany handray anjara amin’io fifidianana io teny Mandrosoa Ivato ny Zoma 23 Febroary lasa teo. Raha tsiahivina, efa ho 12 taona teo ho eo izay ny tenany no niditra tao anatin’ny sehatra politika ary anisan’ny nahafantarana azy bebe kokoa ny fitakiana ireo Nosy manodidina. Mpitsara nandritra ny 25 izy teto Madagasikara ary 15 niasàna tao amin’ny Tribonaly iraisam-pirenena ka lany Filoha lefitr’io Tribonaly io.
« Ny fahamarinana no manandratra ny firenena », io no teny fimalatr’ity kandida ity. Ampy izay ny fahantrana ary mila olom-baovao tia tanindrazana ny firenena hoy izy nandritra ny lahateniny. Isan’ireo nisongadina tao anatin’ny fahampafantarany ny vinam-piaraha-monina ny fitakiana lalampanorenana vaovao sy ny famerenana ny hasin’ny fitsarana. “Tsy ho tafaverina ny fandriampahalemana eto amin’ny firenena izay lasa sakana ho an’ny fampandrosoana sy ny fitokisan’ny vahoaka ny Fitsarana raha tsy manana ny fahaleovantenany ny fitsarana ka tsy hitsabahan’ny mpitondra sy ny mpanao politika ary ny mpanam-bola ny didim-pitsarana sy ny fanadinana hidirana ho mpitsara”, iray amin’ireo voarakitra ao anatin’izany vinam-piaraha-monina izany. Vonona tanteraka ny vehivahy hiatrika izany fifidianana Filoham-pirenena izany.
Raha ny fantatra hatreto, ho tanterahina ao anatin’ny volana Novambra sy Desambra amin’ity taona 2018 ity ny fifidianana izay hitondra an’i Madagasikara ary hantenain’ny vahoaka fatratra ny hisian’ny fitoniana tanteraka mandritra izany taom-pifidianana izany.
Arlette Ramaroson sy ireo mpiara-dia aminy teny Ivato
ENIGME DE LA DEMOCRATIE : Opposition et réconciliation nationale 0
KARAPANONDROM-PIRENENA SY KARA-PIFIDIANANA HOSOKA : “Misy tokoa izy ireny” hoy ny Tale Jeneralin’ny Trano printim-pirenena 0
MOMBA NY FIFIDIANANA FIHODINANA FAHAROA – HAFATRY NY BIRAO MAHARITRY NY FIVONDRONAMBEN’NY EVEKA 0
“HO HALA-BATO sy HO HOSOKA” . Miapanga ny Ministeran’ny Atitany i Marc Ravalomanana 0
FIFIDIANANA. Fanambaran’ny firaisamonim-pirenena PFNOSCM/VOIFIRAISANA 0
AMBASSADE DE FRANCE A MADAGASCAR : Rajoelina n’est pas concerné de la procédure judiciaire française 0
ENIGME DE LA DEMOCRATIE : Opposition et réconciliation nationale
KARAPANONDROM-PIRENENA SY KARA-PIFIDIANANA HOSOKA : “Misy tokoa izy ireny” hoy ny Tale Jeneralin’ny Trano printim-pirenena
MOMBA NY FIFIDIANANA FIHODINANA FAHAROA – HAFATRY NY BIRAO MAHARITRY NY FIVONDRONAMBEN’NY EVEKA
“HO HALA-BATO sy HO HOSOKA” . Miapanga ny Ministeran’ny Atitany i Marc Ravalomanana
FIFIDIANANA. Fanambaran’ny firaisamonim-pirenena PFNOSCM/VOIFIRAISANA